Ukuzalwa kwengane kungumzuzwana wenjabulo enkulu emphakathini waseTsonga. Ngokuvamile izihlobo ezindala zesifazane, noma abanye abafazi, zisiza omama abakhulelwe ngezigaba zokugcina zokukhulelwa nokuzalwa kosana.
Izinsana ezisanda kuzalwa zithathwa ngemithi futhi zihlotshiswe ngezintelezi namabhanki ensimbi. Ngokuvamile omama balula okungenani iminyaka emibili yokuqala yokuphila kwezingane zabo. Uma izingane sezikwazi ukuhamba, umthwalo wokubakhuphula wabelana phakathi komama nodade abadala.
Izingane zilindeleke ukuba zenze imisebenzi yasekhaya kusukela zisencane. Amantombazane asiza unina emisebenzini yabo yansuku zonke, eqoqa izinkuni, futhi athatha amanzi emfuleni oseduze, entwasahlobo noma empompini, ethwala izitsha zamanzi emakhanda abo.
Abafana asebekhulile bafuyisela izinkomo zomndeni, kanti abafana abancane bakha izimbuzi. Ezingxenyeni eziningi zesimo esidala seTransvaal sathola ngemuva kokuqala. Abafana namantombazane baqaliswa emaqenjini ahlukene futhi, ngemva kokuba kwenziwe izinkambiso ezibekiwe, bevunyelwe ukushada.